अर्थमन्त्री शर्माले खुलाए आर्थिक विकास हुन नसक्नुको कारण
'सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारलाई परिपूर्ति गर्न दलहरूमा एकरूपता हुनुपर्छ'
फरकधार / ११ चैत, २०७८
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रणालीअनुरूप सामाजिक न्याय हुन नसक्दा गणतन्त्रपछि पनि आर्थिक विकास हुन नसकेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज, नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रको समसामयिक मुद्दाहरू र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको कार्यदिशामाथि छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सामाजिक न्याय र कसरी मौलिक अधिकारलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा सबै राजनीतिक दलहरूमा आधारभूत एकरूपता हुनुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री शर्माले अहिले शोधनान्तर घाटाको अवस्था ठूलो रहेको पनि बताए ।
‘आज गणतन्त्रपछि पनि पनि विकासले नयाँ गति लिन नसक्नुको कारण हाम्रो यो प्रणाली राज्य प्रणालीको कुरा गरेका छौँ । त्यो प्रणालीअनुरूपको के को कुरा के हो भन्ने एउटाले अर्कोले अर्को कुरा भनिरहेको छ । कसरी हुनसक्छ सामाजिक न्याय, कसरी मौलिक अधिकारलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नमा राजनीतिक दलहरूमा आधारभूत एकरूपता चाहिन्छ । सबै सैद्धान्तिक कुरा मात्रै होइन,’ उनले भने ।
मन्त्री शर्माले कोरोना महामारीका बीच पनि आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भइरहेको बताए । उनले पछिल्लो समय आयात बढेको र उपभोग्य वस्तुको आयात, कृषिजन्य वस्तुको आयात अर्बौंमा रहेको बताए ।
प्रकाशित मिति : चैत ११, २०७८ शुक्रबार १८:३९:४७,